MM Flash News – Page 338 – Myanmar news In myanmar
“နိုင်ငံတကာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာဆု အောင်လအန်ဆန် ဆွတ်ခူး “
ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအန်ဆန်သည် World MMA Awards 2019 ဆုပေးပွဲ၏ နိုင်ငံ တကာ အကောင်း ဆုံးဖိုက်တာဆုကို (UFC) MMA ရှုံးပွဲမရှိ ချန်ပီယံ ခါဘီကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ဆွတ်ခူး ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် Fighters Only မဂ္ဂဇင်းက ကြီးမှူး သည့် အဆိုပါ World MMA Awards 2019 …
ကျောင်းကားတွင် လိုက်ပါစီးနင်း သည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ များ၏ အတက်အဆင်းကို မိဘအုပ်ထိန်း သူ များ mobile app မှတစ်ဆင့် သိရှိနိုင်ရန် စမတ်ကတ် စနစ် ဆောင်ရွက် မည်
ကျောင်းကားတွင် လိုက်ပါ စီးနင်း သည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ၏ အတက်အဆင်းကို မိဘအုပ်ထိန်း သူများ mobile app မှ တစ်ဆင့် သိရှိနိုင်ရန် စမတ်ကတ် စနစ် ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဇူလိုင် ၃ ရက် က ပြုလုပ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သယ်ယူပို့ေ ဆာင်ရေး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု အာဏာပိုင် အဖွဲ့ …
သုံးနှစ်ကျော်ပိတ်ထားသည့် ရန်ကုန်ကားလိုင်စင်ပြန်ပေး ရန် မူအားဖြင့်သဘောတူ
သုံးနှစ်ကျော် ပိတ်ထားသည့် ရန်ကုန်လိုင်စင်ပြန်ဖွင့် ရန် မော်တော်ယာဉ်တင် သွင်းခြင်း နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း များ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (ကြီး/ ကော်)က မူအားဖြင့် သဘော တူကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေးဝန် ကြီး ဌာန လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင် က ဇူလိုင် ၃ ရက်တွင် ပြောသည်။ ကြီး/ကော်က မူအားဖြင့် သဘောတူခဲ့ …
သက်ငယ်မုဒိမ်းပပျောက်ရေး မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်တွင် ဖဲကြိုးနက် ကမ်ပိန်းပြုလုပ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်း ပပျောက်ဖို့ အတွက် ဖဲကြိုးနက်ကမ်ပိန်းလှုပ်ရှား မှုကို မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနနဲ့ မန္တ​လေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်ကွန်ယက်၊ မြင်းခြံလူငယ်ကွန်ယက်၊ကျောက် ပန်းတောင်း လူငယ်ကွန်ယက်တို့ ပူးပေါင်းကာ မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ် မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဇူလိုင် ၃ ရက်မှာ ကျရောက် တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားမှာ တက်ရောက် လာသူတွေကို ဖဲကြိုးနက် ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့ …
တရားရုံးမှာ လက်ကကိုင်ပြီး ကျမ်းကျိန်ရတဲ့ ကျမ်းစာထုတ်ထဲမှာ ဘာတွေ ရေးထားလဲ
July 4, 2019 July 6, 2019 - by admin - LeaveaComment
မလိမ်ကြနဲ့တရားရုံးက အနီရောင်ပိတ်လေးထဲမှာပါတဲ့ ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်စာဆိုတာကျမ်းစူးတဲ့ အကြောင်းလေးပါ…. ကျမ်းကျိန်ကျမ်းစူး ဘယ်ယတြာမှမကယ်နိူင်ဘူး။ တခုခုဖြစ်တိုင်း တရားစွဲမယ် …… တရားရုံးရောက်မှ ရှင်းမယ်နဲ့ လွယ်တယ် မှတ်နေကြတယ် ……. တခြားကိစ္စတွေ အသာထား အရင်ဆုံး တရားလိုရော တရားပြိုင်ရော သက်သေရော ကျမ်းထုတ်ကိုကိုင်ပြီး ကျမ်းကျိန်ရတာ …. ကျမ်းထုတ်ထဲမှာ ဘာကျိန်စာတွေပါမှန်းမသိပဲ လွယ်လွယ် နဲ့ ကျိန်လိုက်ပြီး အမှန်အတိုင်းပြော …
Previous 1 … 337 338 339 … 367 Next